Macluumaad Loogu Talagalay Qoysaska | University of St. Thomas - Minnesota
Ku Saabsan College
Dougherty Family College (DFC) waa kuliyad 2-sano ah oo gaar loo leeyahay oo la awoodi karo oo ku taal Jaamacadda St. Thomas. Iyada oo ku saleysan xarunta Minneapolis, DFC waxay taageertaa ardayda tacliin ahaan loo wado inta ay ku guda jiraan shahaadada la xidhiidha. Waxaan ardayda siinaa taageero shaqsi, tacliin iyo dhaqaale inta ay ku jiraan waxbarashadooda. Waxaan ardayda u diyaarinaa mustaqbalka anagoo kobcinayna shabakadooda xirfadeed iyadoo loo marayo layliyo, iyo anagoo ku hagaya iyaga oo u gudbaya barnaamijka shahaadada 4-sano (Bachelor's).
Aqoonta iyo Fursadaha
Codsiga Jawaabta Macluumaadka Na  soo Booqo
Hadafka Kuliyada Qoyska Dougherty
Qoyska Dougherty ee Jaamacadda St. Thomas waxay taageertaa u diyaarinta aqoonyahanada in ay maraan oo ay ka gudbaan caqabadaha bulsheed iyo maaliyadeed ee ku wajahan waddada ay u marayaan shahaadada koowaad ee jaamacadda.
Dabar-goynta hab-dhismeedka ee nidaamka waxbarashada. Korinta Hogaamiyayaasha mustaqbalka.
Maxaa DFC ka dhigaya mid gaar ah?
Fududeynta U Gudbinta Dugsiga Sare
U Samaynta Guusha
Bixinta qaab-dhismeed tacliimeed
Daryeelida Qofka oo dhan
Waxaan ka caawin doonaa ardaygaaga in uu dhexgalo nolosha iyo dhaqanka Kulliyada Qoyska Dougherty iyo Jaamacadda St. Thomas. Laga bilaabo barnaamijkayaga kobcinta xagaaga; jihaynta ardaygaaga wax kasta oo ay u baahan doonaan inay ka ogaadaan kulliyadda. Waxaan ka caawin doonaa ardaygaaga inuu fahmo faraqa u dhexeeya fasalka dugsiga sare iyo kulliyadda. Shaqadooda koorsada xilliga dayrta waxaa ku jiri doona seminaarka la yiraahdo khibradda sanadka koowaad, kaas oo bari doona ardayda soo socota dhammaan waxay u baahan yihiin inay ogaadaan oo ku saabsan nolosha kuleejka iyo wixii ka dambeeya.
Waxaanu hubin doonaa in ilmahaagu haysto dhammaan agabka ay u baahan yihiin si uu u noqdo arday guulaysta, laga bilaabo laptops iyo buugaag bilaash ah ilaa gaadiid iyo cunto. Barnaamijkeena internship iyo cilaaqaadka latalinta adag ayaa ka caawin doona ardaygaaga inuu ku guuleysto kuleejka iyo shaqadiisa.
Ardayga dhigata DFC, ardaygaaga waxa lagu meelayn doonaa koox koox ah, koox ka kooban ilaa 25 arday kuwaas oo wada qaadan doona dhammaan fasaladooda. Ardaygaagu wuxuu dhisi doonaa dareen xoog leh oo lahaanshaha iyo bulshada asxaabtooda. Macallimiinta iyo la taliyayaasha shaqaalaha ayaa ka caawin doona ardaygaaga xulashada xiisadaha semester kasta.
Fiiri xiisadaha uu ardaygaagu qaadan doono
Waxaan haysanaa kheyraad badan oo kambaska ah oo aan bixino. Casharada waxaa dhiga macalimiin u heellan oo ah lataliye iyo sidoo kale aqoonyahanno. Tababarka degdegga ah ee hoggaaminta ayaa ka caawin doona ardaygaaga inuu ku guuleysto kulliyadda iyo, ugu dambeyntii, xirfaddooda. Ardeydu waxay heli doonaan la-talin mid-ka-mid ah iyo la-talin, ka caawinta inay u diyaar garoobaan inay isbeddel ku sameeyaan abuurista bulsho anshax badan oo caddaalad ah.
Soo hel taageerada qofka oo dhan
Waa ayo Ardaydeenu?
Ardeyda DFC waxay soo bandhigaan sida ay uga go'an tahay gaarista yoolalka waxbarashada. Waxay xiiseynayaan inay helaan shahaado 4-sano ah (Bachelor's) ka dib DFC oo ay muujiyaan baahi dhaqaale oo heer sare ah.
Wax badan ka baro ardayda DFC
Siyaabaha aan u taageerno ardaydeena
DFC waxay siisaa arday badan oo waxbarasho, dhaqaale iyo taageero shaqsiyeed.
Cunto bilaash ah
Adeegyada umeerinta iyo hagidda
Barnaamijka Barashada Xirfadlayaasha
Laptop-yada bilaashka ah
Buuga waxbarashada bilaashka ah
Waxbarashada iyo Gargaarka Dhaqaale
Lacag aad u badan oo gargaar maaliyadeed ah ayaa lagu heli karaa iyada oo loo marayo maalgelinta dawladda dhexe iyo gobolka iyo iyada oo loo marayo taageerada deeq-bixiyeyaasha deeqsinimada leh. Kharashkaagu wuxuu ku xirnaan doonaa baahida qoyskaaga, oo la go'aaminayo marka ay codsadaan kaalmada dhaqaale (FAFSA ama Minnesota Dream Act).
Fiiri Waxbarashada iyo Gargaarka
Waxaanu siin doonaa ardaygaaga taageerada aad u baahan tahay si aad ugu guulaysato
Fursadaha Gaarka ah ee-DFC
Dugsiga Dougherty Family College, ardaygaagu wuxuu heli doonaa ilo taageero oo badan, oo ay ku jiraan lataliye, macalin, lataliyaha bedelka, lataliyaha xirfadaha nolosha iyo wax ka badan.
Ardaygaagu waxa uu koorasyada oo dhan la qaadan doonaa koox ka kooban 25 arday
Ardaygaagu wuxuu dhisi doonaa resumeygiisa iyo shabakadaha xirfadlayaasha ah
U gudubka 4-sano ee Degree
DFC waxay siineysaa ardaygaaga dariiq cad oo uu ku galo shahaadada koowaad ee jaamacadda
La kulan kulliyadda
Baro qaar ka mid ah barayaashayada DFC
Arag dhammaan macalimiinta iyo shaqaalaha
DFC iyo St. Thomas Community
Waxaad noqotay Tommie maalinta ugu horeysa ee aad fasalka ka bilowdo DFC. Waxaad tahay qayb ka mid ah jaamacadda weyn ee St. Thomas, oo waxaad marin u leedahay dhammaan tas-hiilaadka labada xarumood.
Ha ka waaban inaad nala soo xiriirto su'aalo!
Asxaabta iyo Ciddaad Jeceshay Dhacdada
Ha werwerin, ma aanan iloobin taageerayaashii nolosha ardaygaaga! Dhacdada qoyska kuwa la jecel yahay, sida caadiga ah la qabto inta lagu guda jiro Barnaamijka Kobcinta Xagaaga, waa fursad aad kula kulanto hogaanka DFC, macalimiinta, shaqaalaha, ardayda iyo qoysaska kale ardayda DFC.